Farqiga u dhexeeya Kala Bixinta Haamaha & Kala Bixinta Mechanical
Kala Bixinta Mechanical vs. Hydraulic Dredging
Ma isku deyeysaa inaad go’aamiso haddii qodista mashiinka ama qulqulka biyuhu uu ku habboon yahay inuu buuxiyo shuruudahaaga macdanta? U doodayaasha qaar ayaa ku doodi kara in biyo qodista makaanikada ahi ay tahay mid sahlan oo aan ka yarayn dhibaatooyinka shaqaalaha. Si kastaba ha noqotee, qulqulaha qalabka biyuhu waa mid hufan, wuxuu bixiyaa dabacsanaan kordha, wuxuuna sifiican ugu habboon yahay deegaannada adag ee ay qodistayaashu xaddidan yihiin. Intaa waxaa sii dheer, qulqulaha dareeraha ayaa ugu wanaagsan bay'ada markii la helayo alaabo dhadhan leh ayaa loo baahan yahay.
Waxaa jira wax kabadan hal dariiqo oo lagu qodbo. Ugu dambeyntiina, go'aankaaga wuxuu u ekaan doonaa inta ay ku kici doonto iyo inta ay qaadan doonto in la dhammaystiro mashruucaaga qallafsan. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira arrimo kale oo laga yaabo inaad tixgeliso. Waxaad sidoo kale ubaahan doontaa inaad qiimeyso jirkaaga biyaha ee aad ka shaqeyneyso iyo sida xulashada nooca saxda ah ee qalabka duugeynaya ay kaa caawin karaan inaad gaartid yoolalkaaga hirarka leh.
Kala Bixintii Mechanical
Qulqulka mashiinka wuxuu ku habboon yahay jawiga ay kujiraan boos ku filan oo qodista lagu shaqeeyo, taasoo u oggolaaneysa mashiinka dhaqaaqa inuu si dhaqso leh u soo saaro, u tuuro, una dilo qalabka.
Mashaariicda qulqulka mashiinka ayaa caadi ahaan ku yaal meel u dhow xeebta. Caadi ahaan waxay u baahan yihiin dhowr qaybood oo qalab taageero ah oo ay ku jiraan qodista koowaad ee si farsamo ahaan meesha uga saaraysa ciidda iyo ciidda saarista ciidda xeebta, xamuul si ay ciidda ugu dhaqaajiso xeebta, iyo gawaarida waaweyn si ciidda loogu keydiyo warshadda ka shaqeysa.
Kala Bixinta Haamaha
Hal khad biyo ah ayaa loo isticmaali karaa in lagu dhammeeyo isla howsha nuskeed markii la adeegsanayo kheyraad yar. Faa'iidooyinka qaar ee qulqulaha dareeraha waxaa ka mid ah:
Hoos udhaca shaqada iyo qiimaha caasimada
Tamarta iyo qiiqa oo yaraada
Alaab la dhimay iyo kharashyada dayactirka
Ammaan iyo hufnaan
Inta lagu gudajiro howlaha hawo-mareenka, ganaaxyada waxaa laga maydiyaa ciid iyada oo si toos ah loogu gudbiyo warshadda ka shaqeysa. Markay masaafada masaafada ama kor u qaadid toosan kor u qaaddo, bamka xoojiyaha kor u qaadda wuxuu u adeegi karaa ikhtiyaar la arki karo oo ka caawinaya kor u qaadista fursadaha heerarka wax soo saarka ee joogtada ah.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka dheeraadka ah ee qashin qubka hidda waxaa ka mid ah wareejinta tooska ah ee qalabka loo maro warshadda wax soo saarta. Tani waxay keydineysaa waqti iyo lacag labadaba, iyadoo laga takhalusayo baahida loo qabo xoog dheeri ah iyo maareynta labalaabida maaddada.
Xulashada Qalabka Qeexitaanka Qumman ee Shaqada
Qulqulaha biyaha waxay aad ugu habboon yihiin meelaha waaweyn ee biyaha ah halka qulqulayaashu ay ku adag tahay agabka qalabka waxayna mararka qaar xaaladaha deegaanka ay yihiin kuwo aan wanaagsanayn. Ku qodista qulqulaha dareeraha ayaa ah sida ugu hufan ee looga saari karo alaabada si joogto ah, ha ahaato ciid, dhagaxyo, ama kaydad cusbo adag.
Ellicott ee hareeraha hareeraha ayaa ku habboon mashaariicda macdanta. Taasi waa sababta oo ah meelaha loo yaqaan 'dredges' waxaa loogu talagalay in lagu yareeyo kharashka halkii tan oo kor loogu qaado wax soo saarka. Meelaha waaweyn ee Ellicott ayaa loo heli karaa mashaariicdaas oo u baahan qodista qoto dheer ilaa 60 '(18 m).
Qulqulkayaga ayaa loo isticmaalay adduunka oo dhan mashruucyo kala duwan oo macdan qoditaan ah laga bilaabo St. Petersburg, Florida (USA) ilaa gobolka Marinduque ee Filibiin. Wixii talooyin ah ee talo bixin ah, dhammaystir Foomka mashruuca maanta ama nagala soo xiriir emayl ku ah sales@dredge.com.